Macluumaadka Shirkadda - Shiinaha Zhenyuan Qaabdhismeedka Birta Injineernimada Co., Ltd.
Shiinaha Zhenyuan Qaabdhismeedka Birta Injineernimada Co., Ltd.
Shiinaha Zhenyuan Qaabdhismeedka Birta Injineernimada Co., Ltd. waa qandaraasle qaab-dhismeedka bir isku xira naqshadeynta, soo saarista iyo rakibidda.
Shirkadda waxaa la aasaasay bishii Luulyo 2006, oo hore loo oran jiray Kunming Hongli Architectural Design Studio. Markii ay kordheen ganacsiga istudiyaha, waxay si tartiib tartiib ah ugu horumarisay ganacsigeeda dhismaha goobta. Laga soo bilaabo 2015, waxay si tartiib tartiib ah ugu horumarisay ganacsigeeda dhismaha injineernimada loona beddelay shirkad injineernimada qaabdhismeedka birta. Naqshadaynta, farsamaynta iyo rakibidda goobaha Shirkadda waxaa ka mid ah: hudheelada, dhismayaasha xafiisyada, kaydinta qabow, dhirta warshadaha, villa, garoomada iyo dhismayaasha kale ee dhismaha. Waaxda farsamada ayaa ku taxan waaxda asaasiga ah ee shirkadda tan iyo aasaaskeedii. Ugu yaraan 3 qof (oo uu kujiro qofka sharciga ah) waaxdan waxay leeyihiin 3-5 sano oo khibrad naqshadeyn ah machadka naqshadeynta dhammaantoodna waxay leeyihiin asal machad naqshadeysan. In ka badan toban sano, shirkaddu waxay naqshadeysay naqshad ku saabsan 800,000m2, iyo muddo shan sano ah, aagga dhismuhu wuxuu ahaa qiyaastii 280,000m2.
Shirkaddu had iyo jeer waxay dhigtay wax soo saar ammaan ah, tayada injineernimada iyo dhammaystirka sida ku xusan muddada dhismaha markii ugu horreysay. Macaamiisha-koowaad waa mabda'a aasaasiga ah ee shirkadda. Abuuritaanka injineernimo tayo leh ayaa ah qalabka lagu horumariyo suuqa. Fikradan ka dib, shirkaddu waxay ku guuleysatay taageero xoog leh iyo aqoonsi ay ka helaan dadka fikirka ka leh dhammaan qaybaha nolosha.
Tan iyo markii la aasaasay shirkadda, mashaariicda dhismaha injineernimada ee shirkadda iyo taageerada farsamo ayaa ku baahday gobolka oo dhan iyo waddamada Koonfur-bari Aasiya. Iyadoo la tixgelinayo horumarka muddada-dheer ee shirkadda, taageerada farsamada iyo dhismaha mashruuca, waxaan sameyn doonnaa qorshe ballaaran oo gobolka ah waxaanan dooneynaa iskaashi dheeri ah oo lala yeesho dhammaan waddamada ku teedsan "Belt and Road" oo ah udub-dhexaadka.
Sumcadda wanaagsan ee shirkadda, injineernimo tayo sare leh iyo adeeg tayo sare leh ayaa ku guuleystey ammaan ballaaran oo ka timaadda dhammaan qaybaha nolosha waxayna qaabeeyeen sumcadda shirkadeed ee wanaagsan.
Saldhigga wax soo saarka shirkadda:
Saxanka qaabdhismeedka birta iyo saldhigyada wax lagu farsameeyo birta: Tianjin iyo Yunnan, Shiinaha
Iyadoo kororka ganacsiga, Shiinaha Zhenyuan Steel Qaabdhismeedka Engineering Co., Ltd. ayaa si tartiib tartiib ah u dhexgalay dhismaha berrinka. Seddexdii sano ee la soo dhaafay, mashruuca dhismaha goobta wuxuu ahaa qiyaastii 90000 mitir murabac ah, iyo naqshadeynta dibedda iyo taageerada naqshadeynta waxay qiyaastii tahay 260000 mitir murabac.